The Ab Presents Nepal » मैले छोरा काटे भनेर आई, कल्पना समेत गरका थेनौ, आफ्नै दिदिले रुदै सुनाईन घटनाको बारेमा ! (भिडियो)
मैले छोरा काटे भनेर आई, कल्पना समेत गरका थेनौ, आफ्नै दिदिले रुदै सुनाईन घटनाको बारेमा ! (भिडियो)
देवता समान आमा कति क्रुर बन्न सक्छिन् भन्ने उदाहरण बनेकी छन्, भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको बासीखोरा घर भई भोजपुर नगरपालिका वडा नं ९ पानीट्याङकी बस्ने सूर्य थापाकी २५ वर्षीया श्रीमती सम्झना थापा । उनले खुकुरीले रेटेर आफ्नै २२ महिने छोराको हत्या गरेकी छन् ।
प्रहरीका अनुसार उनले २२ महिने छोरा सम्बोधन थापालाई अचानोमा राखेर दुई टुक्रा बनाएकी हो । स्थानीयले हत्या गर्ने थापाको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको बताएका छन् । उनी अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिरहेको छ । पानीट्याङ्कीमा कोठा भाडामा बस्दै आएकी सम्झनाले आफ्नै भिनाजु रमन राईको घरको माथिल्लो तल्लामा खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको बताइएको छ ।
दिदिको भनाई: दिदिको रुदै भनिन – मैले बच्चा मारे भनेर आफैले भन्न आएछ, मैले पत्याईन । बच्चालाई छतमा नछोड लड्छ भनेर कराए । हतार हतार गएर हेरउ । कल्पना पनि गर्न नसकिने घटना भएछ । दिदिको अझै आँसु थामिएको छैन तर निर्दयी आमाको आखामा अलिकती पनि आँसु नदेखिएको उनकै दिदिले सुनाईन । बोल्न सकि नसकी बोल्दै उनले भनिन, म हाम्फालेर मर्छु भनेकी थि, हामिले रोकेउ ।
प्रारम्भिक चरणमा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको भनियतापनी घटना के कारणले भयो योत अनुसन्धान भएपछी थाहा होला, तर यो समाचार सुन्ने र देख्ने ब्यक्तिहरुको हात काप्छन, शरिरमा काडा उम्रन्छन, आँखा रसाउछन, बोलोकी शब्द गलामा अड्कन्छन । निर्दयी आमाको यो हर्कतले सबैलाई मर्माहत बनाएको छ । निशब्द बनाएको छ